Asi mbwende, navanohedhuka navakapara zvitadzo nemhondi nemhombwe navaroyi, navanamati vezvinhu zvisiri Mwari, navarevi venhema, chavo ivo zidziva riya rinobvira moto nesarufa. Ndirwo rufu rwechipiri.”
 “Kana murume aita upombwe nomudzimai womumwe, mhombwe iyoyo nomukadzi aita ufeve iyeyo, vose vari vaviri, vanofanira kutouraiwa. Murume anotorana nomukadzi wababa wake atozvidza baba wake. Murume iyeyo nomukadzi wacho vose zvavo vari vaviri vanofanira kutouraiwa Rufu rwavo nderwokuzviparira. Murume anotorana nomuroora wake, vose zvavo vari vaviri, vanofanira kuti vatouraiwa nokuti vaita makunakuna. Rufu rwavo nderwekuzviparira. Kana murume akatorana nomumwe murume akagara naye sokunge murume nomukadzi, vose zvavo vari vaviri vatoita chinhu chakaipa kwazvo, ngavaurayiwe. Rufu rwavo nderwekuzviparira.
 “Ani naani zvake anorova munhu zvokumuuraya, ngaaurayiwewo. Asi kana akauraya munhu asina kuita zvokumuhwandira, zvangoitikawo iri tsaona, ngaatize andopotera kunzvimbo yandichasarudza kwaasingazourayiwa. Asi kana munhu akaita maune okuvirukira mumwe nehasha, akamuuraya noujarijari, mutorei paatari yangu paanenge andopotera ipapo aurayiwe. “Ani naani zvake anorova baba vake kana amai vake, anofanira kutofa. “Ani naani zvake anoba munhu achimutengesa, kana kuwanikwa ainaye, anofanira kuuraiwa. “Ani naani zvake anoti rushambwa ngaruwire baba vake kana amai vake, anofanira kuuraiwa.
“Munhu anenge aita chakaipa nemhuka ngaaurayiwe.
Vatorei muende navo kugedhi kusuo guru romuguta iroro muvateme namabwe vafe, vose vari vaviri. Musikana anofira nyaya yokuti kunyange zvake aiva muguta haana kuridza mhere. Murume anofirawo nyaya yokufumura mukadzi womuridzi. Naizvozvo muchaita kuti huipi hwakadai upere pakati penyu.
Asi muporofita iyeyo kana muroti wehope iyeyo ngaaurayiwe, nokuti akafurira vanhu kupandukira Tenzi Mwari wenyu akakuburitsai kuIjipiti, akakununurai muuranda, achikutsautsa munzira yawakanzi naTenzi Mwari wako utevere naizvozvo unobva waita kuti huipi hwakadai hupere pakati penyu.
Munhu anoshonha Tenzi nezita anofanira kuuraiwa. Gungano rose ngarimutake nemabwe, chingave zvacho chizvarwa chomuIsiraeri kana kuti mutorwa ngaaurayiwe.
 “Kana munhu ane mhandupandu netsvuuramuromo yemwana asingateereri baba namai vake kunyange vachimurayira zvavo, iye asingavanzwi, baba namai vake ngavamutore vaende naye kuvakuru vakuru veguta, rake raanogara pasuo raro. Ngavataurire vakuru vakuru veguta vachiti, ‘Mwana wedu uyu imhandupandu netsvuuramuromo yomwana, haatiteerere anokara uye chidhakwa.’ Varume vose vomuguta rake ngavamuteme namabwe afe. Nokudaro muchabvisa huipi hwakadai pakati penyu zvokuti vaIsiraeri vose vachazvinzwa vakatya.
Munhu anenge achifanira kufa angaurayiwe chete kana paine umboo hwezvapupu zviviri kana zvitatu. Munhu haaurayiwe kana pachingova nechapupu chimwechete.
“Munhurume kana munhukadzi ari svikiro kana muroyi ngaauraiwe, ngavatakwe nemabwe. Rufu rwavo nderwokuzviparira.”
 Zvino vaIsiraeri vachiri murenje, vakawana mumwe murume achitsvaka huni musi weSabata. Vaya vakamuona achitsvaka huni vakamuunza kuna Mosesi naAroni negungano rose ravaIsiraeri. Vakamubata vakamuchengetedza nokuti vakanga vasati vaziva kuti vangaitei naye. Tenzi ndokuzoudza Mosesi achiti, “Murume iyeyo ngaaurayiwe. Gungano rose ravaIsiraeri ngarindomutema namabwe kunze kwemunharaunda yamatendhe.” Saka gungano rose rakaenda naye kunharaunda yokunze kwamatendhe ndokumutemerako namabwe akafa sezvakaudzwa Mosesi naTenzi.
 “Taurira vaIsiraeri kuti, ‘Ani naani wenyu muIsiraeri kana mutorwa agere nemi muIsiraeri anenge apira mwana wake kuna Moreki, ngaaurayiwe. Vanhu venyika iyoyo ngavamuteme namabwe afe. Ini pachangu ndichaonana nomunhu iyeyo, ndichamucheka ukama nevokwake nokuti akapira mwana wake kuna Moreki akan'oresa nzvimbo yangu inoera, akashonhawo zita rangu rinoera. Kana vanhu venyika iyoyo vakamuona achipira mwana wake kuna Moreki vakanyarara zvavo, vakarega kumuuraya, ini pachangu ndichaonana nomunhu iyeyo pamwechete nemhuri yake yose ndichavacheka ukama nevokwavo, iye pamwechete nevanomutevera pakuita senzenza dzokuteveredza Moreki.’ “Kana munhu akaenda kundobvunza vanosvikirwa kana vanoshopera achiita senzenza kuvateveredza, ini pachangu ndichaonana nomunhu iyeyo, ndichamucheka ukama nevokwake. Naizvozvo zvitsaurei kuva vangu, muve vatsvene nokuti ini Tenzi ndini, Mwari wenyu. Chengetai mirao yangu muite zvainoreva ini Tenzi ndini ndinokuitai kuti muve vatsvene. “Ani naani zvake anoti dai baba wake kana amai vake vawana chinovawana, ngaaurayiwe nokuti anenge achida kuti baba wake kana kuti amai vawirwe norushambwa. Rufu rwake ndorwokuzviparira.
“Ani naani anouraya munhu ngaaurayiwewo.
Munhu anenge azvitutumadza asingateerere mupristi anenge ari ipapo pabasa raTenzi Mwari wako kana kuteerera mutongi, munhu iyeyo ngaafe naizvozvo unobva wabvisa huipi hwakadai muIsiraeri.
Asi kana munhu akaita maune okuvirukira mumwe nehasha, akamuuraya noujarijari, mutorei paatari yangu paanenge andopotera ipapo aurayiwe.
Ani naani zvake anodeura ropa romumwe munhu, ropa rakewo rinofanira kutoita zvokudeurwa nomunhu nokuti Mwari akasika munhu akamufananidza naiye pachake.
 Munhu wose ngaave pasi pehurumende inenge ichitonga nokuti hapana simba rokutonga risingabvi kuna Mwari. Vari kutonga vakatoiswapo naMwari. Saizvozvo munhu anoramba kuteerera vatongi, anoramba kuteerera vakagadzwa naMwari. Vanorambawo kuteerera vacharangwa. Vatongi havasi chinhu chinotyisa kuna vanoita zvakanaka asi kuna vanoita zvakaipa. Unoda here kurega kutya vane simba rokutonga? Kana zvakadaro ramba uchiita zvakanaka. Iye achati kwauri zvakanaka, nokuti iye muranda waMwari kuti zvikufambire zvakanaka. Asi ukaita zvakaipa unofanira kutya nokuti haabatire bakatwa pasina. Iye muranda waMwari wokurangira Mwari munhu anoita zvakaipa. Naizvozvo kuzviisa pasi kuya kunofanira kuitwa kwete kunzvenga chete kuranga kwaMwari asi nokuda kokuterera hana yako. Munoripa mutero nechikonzero chimwechetecho nokuti vatongi vashandi vaMwari vanoita basa irori. Varipei vose zvavanokodzera kuripwa. Kana uri mutero wapamunhu nomunhu ripai mutero iwoyo kana uri mutero wapazvinhu ripaiwo zvinofanira kuripwa muchikudza vanofanira kukudzwa nokuremekedza vanofanira kuremekedzwa.
 Nyanzvi dzomutemo navaFarisei vakauya kwaari nomukadzi akanga abatwa achiita upombwe. Vakamumisa pakati vakati kuna Jesu, “Mudzidzisi mukadzi uyu abatwa ari mukuita upombwe. Zvino muMutemo, Mosesi akati tinofanira kutaka namabwe munhu akadai. Zvino imi munoti kudii naye?” Izvi vakataura vachida kuti vamunzwe kuitira kuti vawane mhosva yokumupa. Jesu akakotama akanyora pasi nomunwe wake. Pavakaramba vachingomubvunza akati twasu kumira ndokuti kwavari, “Uyo asina chitadzo pakati penyu ngaatange kumukanda dombo.” Ndokukotamazve onyora pasi nomunwe wake. Pavakazvinzwa vakaita rumwerumwe kubuda kuchitanga navakuru vacho. Jesu akasiiwa angova oga nomukadzi uya amire pamberi pake. Jesu akasimudza musoro akati kwaari, “Nhai mudzimai iwe vari kupi vaya? Hakuna neakupa mhosva here?” Iye akati, “Hapana changamire.” Jesu akati, “Kana neniwo handikupi mhosva chienda hako usazotadzazve.”
“Regai kumbofunga zvenyu kuti ndakauya kuzoparadza mutemo kana vaporofita. Handina kuuya kuzozviparadza, asi kuzozvizadzisa.
 Ndinoti kuurayiwa kwenyu vanhu kunofanira kutoripwa. Mhuka kana munhu anouraya munhu ndinoda kuona kuti atoripa. Munhu anouraya mumwe munhu, mhaka iyoyo inoripwa norufu rwomunhu. Ani naani zvake anodeura ropa romumwe munhu, ropa rakewo rinofanira kutoita zvokudeurwa nomunhu nokuti Mwari akasika munhu akamufananidza naiye pachake.
 “Makanzwa kuti zvakanzi ziso rinofanira kutsiviwa neziso zino richitsiviwa nezino. Asi ini ndinoti kwamuri, ‘Usadzivise wakaipa.’ Kana munhu akakurova mbama padama rorudyi mutendeudzire rimwezve.
“Kana murume abatwa akarara nomukadzi womuridzi, gombarume iroro nomukadzi iyeyo vose vari vaviri ngavaurayiwe kuitira kuti mubvise huipi hwakadai pakati pevaIsiraeri.
Hama dzangu dzadiwa, musatsividze asi zvisiirei kuna Mwari anoranga nehasha dzake nokuti zvakanyorwa zvichinzi, “Kutsividza ndokwangu. Ini ndini ndinodzorera.” Ndizvo zvinotaura Tenzi.
Mitemo inoti usaite upombwe, usauraye, usabe, usachive nemimwe mitemo yose inobatanidzwa yose mushoko iri rinoti, “Ida mumwe wako sokuda kwaunozviita.”
Iwe munyengedzi, tanga wabvisa danda riri muziso rako. Ipapo unenge wava kunyatsoona kubvisa kabanzu kari muziso rehama yako.
Kana murume akatorana nomukadzi achizotoranawo navambuya vake, uipi ihwohwo, iye naivo vanofanira kupiswa nomoto kuti pakati penyu parege kuva nouipi.
Kana mwanasikana womupristi upi noupi zvake akazviipisa achiita upfambi, atofumura baba vake ngaapiswe nomoto.
 “Buritsai akanyomba Mwari uya kunze kwematendhe. Vanhu vose vakamunzwa achishonha Mwari ngavaise maoko avo pamusoro womurume iyeyo, gungano rose ravaIsiraeri ngarimutake namabwe afe. Iwe ibva waudza vaIsiraeri kuti ani naani anonyomba Mwari anozviparira. Munhu anoshonha Tenzi nezita anofanira kuuraiwa. Gungano rose ngarimutake nemabwe, chingave zvacho chizvarwa chomuIsiraeri kana kuti mutorwa ngaaurayiwe. “Ani naani anouraya munhu ngaaurayiwewo. Ani naani anouraya chipfuwo chomumwe ngaachiripe. Upenyu hunoripwa noupenyu. “Kana munhu akakuvadza mumwe ngaakuvadzwewo sokukuvadza kwaakaita mumwe. Kana akatyora bvupa romumwe, bvupa rake ngarityorwewo, ziso rinoripwa neziso, zino rinoripwa nezino. Munhu sokukuvadza kwaanenge aita mumwe ndiko kuvadzwa kwaanofanira kuitwa Ani naani anouraya chipfuwo chomumwe ngaachiripe. Asi ani naani anouraya munhu ngaaurayiwewo. Mutemo mumwechete iwoyu ndiwo unosunga zvimwechetezvo muIsiraeri nomutorwa nokuti ini Tenzi ndini Mwari wenyu.” Saka Mosesi akataurira vaIsiraeri izvozvo. Vakatora murume uya akashonha Mwari vakaenda naye kunze kwematendhe vakamutaka namabwe ndokubva afa. Saka vaIsiraeri vakaita zvakataurirwa Mosesi naTenzi.
2 Samueri 12:13
Dhavhidhi akati kuna Natani, “Ndakatadzira Tenzi.” Natani ndokuti kuna Dhavhidhi, “Tenzi akuregererai chitadzo chenyu hamuchafa.
Asi Mwari akaratidza kuti anotida nokuti Kristu akatifira tichiri vatadzi.
Pavakasvika panzvimbo inonzi yeDehenya ipapo ndipo pavakamuroverera pamuchinjikwa navapari vedzimhosva vaya vaviri mumwe ari kurudyi mumwe ari kuruboshwe.
“Musatonge vamwe, imiwo hamuzotongwi. Matongero amunoita vamwe ndiwo amuchatongwawo nawo.
Shona Bible SCLB
Shona Common Language Bible © Bible Society of Zimbabwe, 2008